Ampidino Nemezis: Mysterious Journey III ho an'ny Windows
Ampidino Nemezis: Mysterious Journey III
Ampidino Nemezis: Mysterious Journey III,
Nemezis: Mysterious Journey III dia lalao fitsangatsanganana ankamantatra izay ahitanny mpizahatany roa, Bogard sy Amia, ao anaty andiana hetsika miafina. Vahao ny piozila manaitaitra ary fantaro ny tantara iray izay tsy ho tantinao mandra-pahatonganny farany.
Ampidino ny Nemesis: Journey miafina III
Mandehandeha ary mahita: tontolo iainana mahafinaritra, hafahafa, maro sosona ary mistery; Planet Regilus. Tsy zava-poana ny ady nataonny fanjanahan-tany sy ny mpikaroka tany tsy miankina niady ho anity planeta ity. Farany, ny oasis ny tahiry voajanahary sy ny mineraly hita tao Regilus dia noheverina ho kely loatra ka tsy mendrika hotadiavina, ary tsy nisy fankahalana intsony ireo masoivohonny fizahan-tany teleportation samihafa dia namadika azy io ho toerana fizahan-tany tsy manam-paharoa.
Very any aminny habakabaka: Nemesis: Mysterious Journey III dia lalao fitsangatsanganana an-tsokosoko miaraka amina mpanafika ati-doha maro satria mpizahatany roa i Bogard sy i Amia no sendra hetsika tsy fantatra. Miparitaka ireo mpihetsiketsika ary tsy maintsy miantehitra aminny torolàlana izay lasa hafahafa kokoa ny fitondran-tenany hifankahitana.
Tadiavo ny namanao: Mandritra ny dianao any Regilus, ny mahery fo dia hitsidika toerana fito samy hafa, samy hanana traikefa kanto vaovao tanteraka. I Bogard sy i Amia dia tsy maintsy mamaha ankamantatra mahaliana maro samy hafa aminny fahasarotana isan-karazany mba hifankahitana. Nemesis: Mysterious Journey III dia lalao mahafinaritra ho anny multiplayer. Misafidiana olana aminny ankamantatra izay mifanaraka aminny zavatra niainanao taminireo karazana lalao ireo. Aminny tranga maro dia miandry anao ny torolàlana nomerika iray izay tena zava-dehibe ny tolo-keviny. Azonao antoka ve fa afaka matoky ianao?
Ilay mpamorona sy mpamorona ankamantatra ny lalao dia i Roland Pantola, mpamorona ny lalao fitsangatsanganana malaza toy ny AD 2044, ReAH, ary ny andiany Schizm.
Puzzles fampidirana sy fikikisana izay hizaha toetra ny fahaizanao mitantara haingana ny zava-misy ary mieritreritra tsy mitombina
Zavamananaina mainty sy mahavariana mahatalanjona ao aminny Planet Regilus
Karakter voasoratra tanteraka, manaitaitra
Tantara maharesy lahatra sy manaitaitra ary ny fiafarany dia hahagaga na dia ireo mpankafy efa za-draharaha indrindra aza.
Torolàlana nomerika hanampy anao aminny toe-javatra sarotra sy ambaratonga fahasarotana isan-karazany arakaraka ny zavatra niainanao